Sony က Vegas Pro က, သင်ဗီဒီယို၏အရောင်များချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အရောင်ဆုံးမခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအတော်လေးမကြာခဏမကောင်းတဲ့ရိုက်ကူးမသာအသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်နှင့်အတူ, သငျသညျအခြို့စိတ်ဓါတ်များ set နှင့်ရုပ်ပုံကိုပိုပြီးအရည်ရွှမ်းစေနိုင်သည်။ Sony ကဂတ်စ်၏အရောင်ကိုချိန်ညှိဖို့ဘယ်လိုကြည့်ကြပါစို့။
Sony က Vegas မှာ, အရောင်ဆုံးမခြင်းအောင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်အဘယ်သူမျှမ tool ကိုလည်းမရှိ။ ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့အဆနျးစစျကွပါစို့။
Sony က Vegas မှာအရောင် curves
1. သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုလျှောက်ထားရပါမည်သည့်အဘို့ဗီဒီယိုတစ်ကားကို Upload လုပ်ပါ။ သင်သာတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အပိုင်းအစဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှုလျှောက်ထားချင်လျှင်, "S" ကို key ကိုသုံးပြီးဗီဒီယိုဝေဖန်လော့။ အခုတော့ရွေးချယ်ရေးအပေါ် "အထူးသက်ရောက်မှုဖြစ်ရပ်များ" ပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။
2. အခုတော့အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှု "အရောင် Curves" ( "အရောင် Curves") ကို select ဖို့ဆိုးကျိုးများစာရင်းထဲက။
3. အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ကကွေးနှင့်အတူဆော့ကစားမယ့်နေကြသည်။ ပထမတော့အဲဒါကိုသုံးစွဲဖို့အဆင်မပြေဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာနိယာမကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်, ပြီးတော့လွယ်ကူလိမ့်မည်ဟုထင်ရပေမည်။ ကထောင့်ဖြတ်၏လက်ဝဲမှဆွဲထုတ်လျှင်ညာဘက်ထိပ်မှာအမှတ်, ထွန်းတောက်သောအရောင်အဆင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည် - အလင်းရောင်မှိန်ခြင်း - ညာဘက်လျှင်အလင်းအရောင်များကိုအလှဆင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါထောင့်ဖြတ်၏လက်ဝဲဖို့ဆွဲလျှင်အောက်ပိုင်းလက်ဝဲထောင့်, မှောင်မိုက်သေံအဘို့နှင့်ယခင်တစ်ဦးနှင့်ဝသကဲ့သို့တာဝန်ရှိသည်ထောက်ပြ - ကအမှောင်ထဲမှာတန်ချိန်နှင့်လက်ျာအလှဆင်ရန်ပါလိမ့်မယ် - ပို. ပင်ထင်ရှားတဲ့။
ယင်း preview ကိုပြတင်းပေါက်ပြောင်းလဲမှုများရှာဖွေပါနှင့်အသင့်လျော်ဆုံး setting များကိုထားကြ၏။
Sony က Vegas မှာအရောင် Corrector
1. "အရောင် Corrector" - နောက်ထပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကျနော်တို့ကိုသုံးနိုင်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အထူးသက်ရောက်မှု menu ကိုသွားပြီး "အရောင် corrector" ( "အရောင် Corrector") ကိုရှာပါ။
2. အခုဆိုရင်သင်လျှောရွှေ့ခြင်းနှင့်အရောင် corrector setting များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင် preview ကို window ထဲမှာမြင်ရပါလိမ့်မည်အားလုံးသည်အပြောင်းအလဲများကို။
Sony က Vegas မှာအရောင်ချိန်ခွင်လျှာ
1. "အရောင် Balance" ( "အရောင်ချိန်ခွင်လျှာ") - ငါတို့သည်ဤဆောင်းပါး၌ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်သည့်နောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု။ သက်ရောက်မှုများ၏စာရင်းထဲမှာရှာပါ။
2. Slider ကိုရွေ့လျားခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ပေါ့မိုက်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဗီဒီယိုတစ်ခုအရောင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ယင်း preview ကိုပြတင်းပေါက်ပြောင်းလဲမှုများရှာဖွေပါနှင့်အသင့်လျော်ဆုံး setting များကိုဖော်ထုတ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ကမသင် Sony က Vegas မှာအရောင်ချိန်ညှိနိုင်သည့်နှင့်အတူအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုများ, စဉ်းစားပါပြီ။ သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့အများကြီးပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုများတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။